IJustControl.it: Ngokuzenzekelayo Ukuqokelelwa kweDatha yokuQokelelwa kweDilesi kumajelo | Martech Zone
Intengiso yedijithali iqhutywa yimfuno yokwenza ulwenziwo olukhulu: imithombo yolwazi emitsha, indibaniselwano entsha yobambiswano, amaxabiso asoloko etshintsha, iimeko eziphucukileyo ze-UA, njl. igranular.
Kungenxa yoko le nto abaphumeleleyo nabafuna ukuba ziingcali befuna isidingo sokusebenza ukuze bakwazi ukujongana neemeko ezinzima kunye nemifanekiso entsonkothileyo. Nangona kunjalo, izixhobo ezininzi esele zikhona zinika indlela yexesha elidlulileyo 'elingalinganiyo-yonke'. Ngaphakathi kwesi sikhokelo sokuqala, zonke iimeko ezinokubakho zentengiso zimiselwe kwasekuqaleni, kungekho thuba lokugubungela iimfuno zabantu ngokupheleleyo. Kwangelo xesha, uMtyholi uhlala eneenkcukacha.
Ngokulandelanayo, intengiso yanamhlanje ifuna iibhokisi zezixhobo endaweni yezixhobo, ukuze abathengi bazenzele eyabo imithetho, ukuhamba kwedatha, iimetrikhi, njl.
Ubeko.it, Isisombululo esitsha soluhlu lweenkcukacha eziphambili, lilinge lokugcwalisa lo msantsa. Kulesi siqwenga, isishwankathelo esifutshane sale bhokisi intsha yezixhobo zentengiso yedijithali sinikezelwe. Ukubonisa amandla apheleleyo e-JustControl.it, eli nqaku libonisa imizekelo embalwa yendlela efumana ngayo, iinkqubo kunye nokuguqula idatha.
Isishwankathelo seMveliso yeJustControl
IJustControl.it ibekwe ngokusemthethweni njengesisombululo esenza ukuba amashishini asebenzise ulawulo olupheleleyo kwinkcitho yentengiso, kuvavanye ukusebenza kwephulo kwiindlela ezahlukeneyo ezinomdla, kunye nokuvelisa iingxelo ezenziwe ngexesha elifanelekileyo. Kananjalo, ithembisa ukusebenza kwe-ETL ye-injini kunye namandla okuzenzekelayo kwimephu yedatha esekwe kwimithombo emininzi kwi-UI enye.
Okwangoku iqela leJustControl.it lithi malunga nemithombo yedatha engama-30 inokunxibelelana kwangoko kubathengi bayo.
Kwangelo xesha, umdlali omtsha uxinzelelo lokuba unokuvula ngokulula nawuphi na umthombo wedatha kwimfuno. 'Isangqa' sangoku senziwe kwaye sachazwa ngabaxumi baso. Ukuba kukho imfuneko yokudibanisa entsha, iya kuqhagamshelwa simahla. Uhambo oluqhelekileyo lwabathengi kunye nenkqubo yokukhwela, ngokweJustControl.it, ijongeka ngale ndlela.
Nje ukuba iseshoni yedemo ihanjisiwe, iqela leJustControl.it licela umthengi ukuba agcwalise isishwankathelo sokugubungela zonke iinkcukacha zesampulu yedatha kunye nokudibanisa imithombo ebandakanyekayo kwiakhawunti yabo yeJustControl.it.
Emva koko, imeko yesampulu-nazo zonke iinkcukacha ezinxulumene noko-isetiwe kwaye yalungiswa.
Nje ukuba imeko ilungiswe, kwenziwa ingxelo eyenziwe ngokwesiko. Iziphumo zalo ziyaqinisekiswa ngokuchasene namanani abathengi.
Okokugqibela, ezinye iimeko ziyenziwa.
IJustControl.it yakhutshwa kungekudala. Kungenxa yoko le nto uninzi lophononongo lukawonkewonke lungapapashwa ukuza kuthi ga ngoku. Kwangelo xesha, sele ikho ezinye ezintle ingxelo ekhoyo. Iinkampani zichaza ukuthembeka kweengxelo zedatha eluhlaza, ubuchule bokwenza ngokwezifiso ngokubanzi okunxulumene nokulungiswa kwedatha kunye nokwenza imephu, kunye nokwenza lula.
Kuya kuba ngumdla ukujonga ukuba iJustControl.it ifanelekile njani na kuvavanyo oluqinisekileyo.
Ubeko.it UkuQinisekiswa kweDatha
Ngokweqela leJustControl.it, isisombululo sabo asikwazi kuphela ukukhupha idatha eluhlaza 'njengoko injalo', kodwa nezinye izinto.
Okokuqala, ibhokisi yezixhobo ikhupha idatha eluhlaza. Kwamagama omkhankaso, iithegi zamazwe, abaphathi kunye namaqonga anokuchongwa. Ibango lokuba, nge Ubeko.it, Akukho zithintelo kulo naluphi na uhlobo lomkhankaso. Inani elingenamda lemilinganiselo yesiko kunye neefilitha zabo ziyathembiswa, kunye nenani elingenamda leekholamu, zombini kubalwa ii-KPIs kunye neemetriki. Ukukhutshwa kwemethadatha nako kuyinyani.
Emva koko, idatha ihluzwa ngabaphathi, amaqonga, abaphathi, njl.
Kwinqanaba lesithathu, ulwazi olunxulumene nenzuzo oluvela kubazingeli kunye / okanye kwizisombululo zangaphakathi ze-BI zinokongezwa kwaye zidityaniswe.
Nje ukuba loo datha yongezwe, ulwazi malunga nemithombo yolwazi kunye nezinye 'iithegi' zedatha zinokongezwa.
Okokugqibela, amacebo okucoca ulwelo ngamazwe kunye namaqonga kuyo yonke imithombo enxulumene nayo ayasetwa. Ngenxa yoko, kwenziwa umfanekiso omnye osekwe kumaqhekeza edatha ahlukeneyo. Oko kukuthi, ingxelo efunekayo yokwenza izigqibo ingaveliswa.
Ngokubhekisele kwinkangeleko yangoku kunye nokuziva kwesisombululo, iisampulu zilandelayo zibonisa.
Ideshibhodi ngokubanzi enoluhlu olunokubakho lwedatha:
Ideshibhodi ngokubanzi ngokukhethwa kweedatha zesiko ezikhethiweyo:
Ideshibhodi ngokubanzi nesampulu yezihluzi zesiko ezisetyenzisiweyo
IJustControl.it ibalaselisa ukuba amandla okwenza ngokwezifiso kwezi zinto zikhankanywe apha ngasentla angenamda. Kweli candelo lilandelayo, ungabona ukuba leliphi na icebo elenza oku kungabinamda.
Ubeko.it Ukuseta Umzekelo weSampulu
Eli tyala lisekwe kwimisebenzi eqhutywa liarhente yokuthenga amajelo asebenzisa imithombo engama-40, kubandakanya InkquboFlyer tracker kunye neenethiwekhi. IJustControl.it ngesandla yenza iingxelo ezimbini ezibandakanya iimfuno zabathengi.
Ingxelo yokuqala sisiphumo sokuqhubekeka kwedatha yokusebenza: idatha edityanisiweyo eluhlaza enxulumene nenkcitho yentengiso kuyo yonke imithombo efanelekileyo. Iqhubekekisa yonke idatha iyonke ngelixa ithatha iipropathi zayo ngokuqwalaselwa (njengamaqela ahambelana nawo ukuya kubathengi, amajelo, njl.njl.).
Ingxelo yesibini ijolise ekuboneleleni ngomfanekiso ongazukujongana nedatha eluhlaza, kodwa ngeemetriki ezibaliweyo- ezo zibalwe kuloo ndawo kwaye zisekwe kwiifomula ezinokwenziwa ngokwezifiso. Uluhlu lwangempela lweemetrikhi lubandakanya le milinganiselo ilandelayo.
Ukwenza ukuba kwenzeke, iqela leJustControl.it lenze ulandelelwano olukhethekileyo lwezenzo eziboniswe ngezantsi.
Kuyaphawuleka ukuba yi Ubeko.it iqela lenkxaso uyakha oku kulungiswa kwedatha kuhamba. Nangona kunjalo, umboneleli wesisombululo uthatha ukuba, kancinci kamva, obu buchule buya kufumaneka kubathengi ukuze bakwazi ukuzakhela ngokwabo.
Okwangoku, uvavanyo lwasimahla lwenyanga enye luyafumaneka. Iiarhente zedijithali kunye nabaphuhlisi beapps banoku-odola idemo kwaye bavavanye ngokwabo Ubeko.it. Abathengi abangaphezulu kweJustControl.it banemithombo eya kudityaniswa ukuze isetyenziswe kwangoko.
Ukudityaniswa kwemithombo yolwazi okwangoku kubandakanya iGoogle, iiNtengiso zikaFacebook, iTikTok, i-CSV, i-Excel, i-YouAppi, i-AD Colony, iadcash, iAdperio, iADSKEEPER, iAdsterra Network, Affise, AppSamurai, APPLIFT, appnext, AppsFlyer, hlengisa, BeaverAds, Chartboost, Clickadu, EngageYa, ExoClick, Fyber, IronSource, Liftoff, mgid, VK, Yandex Direct, MyTarget, PropellerAds, Remerge, Revcontent, RichPush, Snapchat, Tapjoy, UNGADS, umanyano ADS, Vungle, Mintegral, kunye neZeropark.
tags: Ikholoni yeADintengisolungisaI-AdperioUMLAWULIInethiwekhi yeAdsterraIntetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili AdsterraAffiseUsetyenziso lweSamuraiISICELOisihlomeloIifayile zeFayileAppSamuraizintsiwebimbekoUhlalutyo lweempawuIintengiso zeBeververItshathiBoostCofaUmjelo wejelo lomnqamlezoCSVUkubandakanyaYaphambiliexoclckexoClickFacebookIintengiso ze-facebookUFyberuphandoI-Iron_SourceIronSourcexikube.itSusa ngaphezulumgidmintegralMyTargetIintengiso zePropellerKhumbula kwakhonaRevcontentI-RichPushngeneIthebhuTikTokTwitterIINKCUKACHAubunye ADSumanyanoADSvkIVoluumIhlathiYandexYandex ngqoYouAppiZeropark